बुधवार ५.३६ अंक बढेर बन्द भयो बजार, १९४ कम्पनीको १ अर्ब ८४ करोडभन्दा बढीको शेयर कारोबार
भदौ ३१, काठमाडौं । मंगलवार सामान्य अंकले करेक्सन भएको बजारले बुधवार भने सकारात्मक गति लिएको छ । यसदिन बजार ५ दशमलव ३६ अंक बढेर १ हजार ५४१ दशमलव ४० विन्दुमा पुगेको हो । अघिल्लो कारोबार दिन मंगलवार ४ दशमलव ४७ अंक घटेर १ हजार ५३६ दशमलव शून्य ३ विन्दुमा बजार बन्द भएको थियो ।
बुधवार १ हजार ५३७ दशमलव ३५ विन्दुदेखि खुलेको बजार १ हजार ५४३ दशमलव ९९ विन्दुसम्म पुगेको थियो भने १ हजार ५३० दशमलव ६८ विन्दुसम्म झरेको थियो । निकै उतारचढाबका बिच नेप्से परिसूचकसँगै सेन्सेटिभ इन्डेक्स पनि न्यून अंकले बढेको छ । सेन्सेटिभ इन्डेक्स यो दिन शून्य दशमलव ८३ अंकले बढेर ३०५ दशमलव ४८ विन्दुमा पुगेको हो ।
अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा बुधवार कारोबार रकम पनि बढेको छ । मंगलवार रू. १ अर्ब ८० करोड १ लाख ९७ हजार बराबरको शेयर कारोबार भएको थियो । बुधवार भने १९४ कम्पनीको रू. १ अर्ब ८४ करोड ५६ लाख ३४ हजार बराबरको ६३ लाख ९० हजार ८३ कित्ता शेयर कारोबार भएको हो ।
यस दिन होटल समूहका शेयरप्रति लगानीकर्ताको आकर्षण उच्च देखिएको छ । बुधवार होटल समूहको परिसूचक ९ दशमलव शून्य ४ प्रतिशत बढेको छ । यो दिन कारोबारमा आएका १२ समूहका परिसूचकमध्ये बैंकिङ समूहको शून्य दशमलव ३७ प्रतिशत परिसूचक घटेको छ भने बाँकी समूहको बढेको छ ।
होटलसँगै यस दिन जलविद्युत र व्यापारिक समूहको परिसूचक पनि सर्वाधिक बढेको छ । जलविद्युत समूहको ४ दशमलव ७१ प्रतिशत र व्यापारिक समूहको २ दशमलव १२ प्रतिशत परिसूचक बढेको हो ।
त्यस्तै बुधवार विकास बैंकको शून्य दशमलव १२ प्रतिशत, वित्तको शून्य दशमलव १६ प्रतिशत, निर्जीवन बीमाको शून्य दशमलव ५२ प्रतिशत, उत्पादन तथा प्रशोधनको शून्य दशमलव शून्य ९ प्रतिशत, अन्यको शून्य दशमलव १५ प्रतिशत, लघुवित्तको शून्य दशमलव १९ प्रतिशत, जीवन बीमाको शून्य दशमलव ७४ प्रतिशत र म्युचुअल फण्डको शून्य दशमलव ५१ प्रतिशत परिसूचक बढेको हो ।
बुधवारको कारोबारमा पनि नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको सर्वाधिक शेयर कारोबार भएको छ । यसदिन कम्पनीको रू. ९ करोड ६१ लाख ९६ हजार बराबरको शेयर कारोबार भएको हो । बढेर बन्द भएको बजारमा एनआईसी एशिया ब्यालेन्सड् फण्डको ३ दशमलव ८७ प्रतिशत र लक्ष्मी इक्वीटी फण्डको ३ दशमलव ७१ प्रतिशतले इकाई मूल्य घटेको छ ।
बुधवार तीन जलविद्युत कम्पनीको शेयरमूल्य १० प्रतिशतले बढेको छ । यस दिन सिनर्जी पावर डेभलपमेण्ट, घलेम्दी हाइड्रो लिमिटेड र बरुण हाइड्रोपावर कम्पनीको शेयरमूल्य १० प्रतिशतले बढेको हो ।
नेपाल फाइनान्सको शेयर मूल्य ९.६३ % वृद्धि, मूल्य वृद्धि हुनेमा अधिकांश वित्त कम्पनी[२०७७ असोज, १२]
४.७३ अंक घट्यो शेयर बजार, १ अर्ब ६९ करोडभन्दा बढीको कारोबार [२०७७ असोज, १२]
१५५९.१८ विन्दुमा नेप्से, १ अर्ब ८ करोड बराबरको शेयर खरीदविक्री (२ बजेको अपडेट) [२०७७ असोज, १२]
दोस्रो घण्टामा १.४० अंकले घट्यो नेप्से, नेपाल फाइनान्सको शेयरमूल्य सर्वाधिक वृद्धि (१ बजेको अपडेट) [२०७७ असोज, १२]
सोमवार पहिलो घण्टामा १.६३ अंकले बढ्यो नेप्से परिसूचक (१२ बजेको अपडेट) [२०७७ असोज, १२]